🥇 ▷ Eve waxay soo bandhigaysaa badalkeeda cusub iyo dareeraha biyaha ee la jaan qaada HomeKit ✅
Eve waxay soo bandhigaysaa badalkeeda cusub iyo dareeraha biyaha ee la jaan qaada HomeKit
Toddobaadka bandhigyada ee IFA 2019, maantana waxaan kugu soo qaadaneynaa wararka mid ka mid ah sumadaha ugu caansan ee kujira qalabka HomeKit. Xaawa waxay ka faa’iideysatay carwada Berlin si ay u soo bandhigto laba wax soo saar oo gabi ahaanba cusub: beddelaad la jaan qaada HomeKit oo la waafajisa nidaamyada Yurub (Eve Light Switch) iyo baaraha dareeraha biyaha (Eve Water Guard).
dheeraad ah waxay soo saartay warsideeda ‘HomeKit’ oo iib ah kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku xirnaato illaa 8 qalab oo kale oo xallinaya dhibaatooyinka ballaaran ee aaladda Bluetooth. Waxa kale oo uu soo bandhigay nooc cusboonaysiin ah oo madaxiisa kulul kuleylka ah Eve Thermo madaxa. Faahfaahinta oo dhan, hoosta ka daawo.
Beddelidda dhammaan iftiinka guriga si looga dhigo mid la jaan qaadaya nidaam kasta oo ah qalabaynta guriga waa qaali, HomeKitna arrintaas kama duwana taas. Laakiin waxaan haysanaa wax kale oo aan ku beddelan karno dhammaan nalalka ku jira qol: beddel badhanka. Sidan oo aalad hal ah ayaan horey ugu guuleysanay in nalalka lagu xakameyn karo HimeKit iyo dhammaan faa’iidooyinka ay bixiso. Xaaladda Korantada Eve Waa isbedel cusub oo la jaan qaadaya nidaamka yurubiyaanka ah ee taas oggol, tanina sidoo kale waxay u shaqaysaa sidii wareejin caadi ah, nal shidida ama dami markii la cadaadiyo. Waxay diyaar noqon doontaa laga bilaabo Oktoobar gudaha Jarmalka, Belgium, Austria iyo Nederland, waxaana rajeyneyaa in dhowaan loo gudbin doono Yurub inteeda kale.
Badeecadda kale ee cusub ee soo saarta magaca ayaa ah Eve Water Guard, qalabka biyaha daadiya ee kuu digaya nalalka iyo dhawaaqa isla marka ay jiraan wax yar oo daadad ah. Waxa kale oo aad ka heli doontaa ogeysiiska u dhigma iPhone-kaaga iyo Apple Watch, Thanks to Integration with HomeKit. Waxay ku qumman tahay inaadan sugin deriskaaga hoose si aad ula yaabto nasiib xumo ah in qubayskaagu leeyahay meel uu ku baxsado. Weli ma hayno taariikhda soo-deynta weli.
Ugu dambeyntiina, astaantu waxay cusbooneysiisay madaxiisa heerkul ahaan (Eve Thermo) iyadoo leh shaashad tayo sare leh iyo kontaroolo taabasho wanaagsan, oo ay weheliso hawlgal qabow. Eve Extret, the repeater oo kuu oggolaanaya inaad ku xirato qalabka Eve hadba meel Bluetooth ka fog masaafada aad ka taliso, hadda waa iib. Waxaan ku falanqeynaa kanaalkayaga (isku xirka) oo aan xallinnaa dhibaato inbadan oo naga mid ahi ay sugayeen qof wax hagaajiya muddo dheer. Mar dhow waxaan ka heli doonnaa Amazon.